Nọmba Mayan sitere na 1 ruo 1000: Ndepụta na mmega ahụ
Ndị Maya bụ otu n'ime obodo mepere emepe na nke kachasịnụ na Mesoamerica na ụwa niile. Omenala ndị Mayan na -adịgide na Peninsula Yucatan, Mexico, na akụkụ ụfọdụ nke Guatemala. Obi abụọ adịghị ya na otu akụkụ kacha dọta uche na ndị Mayan bụ na ha tozuru oke ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ, na -enwe nnukwu ihe ọmụma banyere ịgụ kpakpando na usoro ọnụọgụ zuru oke. N'isiokwu a anyị ga -elekwasị anya na ya Nọmba ndị Maya ma ị nwere ike mụta ihe ndị bụ isi.
Usoro ọnụọgụ Mayan na -adọta ọtụtụ nlebara anya n'ihi na ọ zuru oke ma tolite, n'agbanyeghị na etolitela n'onwe ya. Mmepeanya a nwere echiche doro anya cero, ihe ndị Europe enweghị ruo mgbe ndị Hindu gosiri ha ya.
1 Nọmba Mayan niile
1.1 site na 1 ruo 100
1.2 site na 1 ruo 500
2 Akụkọ banyere nọmba Mayan
3 Etu esi ede Nọmba Mayan
4 Njirimara nke ọnụọgụ Mayan
4.1 Sistemụ nọmba “isi” nke Mayan
4.2 Ọpụpụ ya na ọdịnihu
5 Ihe omume
Nọmba Mayan niile
Na -esote anyị ga -edepụta nọmba Mayan niile site na 1 ruo 1000. Enwere ọtụtụ onyonyo ị nwere ike ibudata na kọmpụta gị, mkpanaka gị na ọbụna ibipụta ya iji mụọ ha n'ihu.
site na 1 ruo 500
Anyị nwere olile anya na ndepụta a baara gị uru, ị nwere ike budata n'ụdị PDF site na ịpị ebe a. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla nwere ọnụọgụ, ị nwere ike ịhapụ ikwu na njedebe nke akụkọ a.
Akụkọ banyere nọmba Mayan
Ndị ọkachamara na -eche na Sistemu ederede Maya bụ ihe odide, n'ihi na o nwere myirịta ụfọdụ na sistemụ eji na Egypt oge ochie. Ihe odide ya mejupụtara ngwakọta echiche na akara ụdaolu, yabụ na ọ siri ike ịkọwa ọdịnaya ya.
Enweghị ọtụtụ ozi gbasara ide Mayan n'ihi na ndị ụkọchukwu ndị Spain nyere iwu ka ọkụ gbaa akwụkwọ Mayan niile.
Nkọwa na -atọ ụtọ gbasara sistemụ ọnụọgụ Mayan bụ na ha chepụtara ya iji tụọ oge na ịgaghị agbakọ mgbakọ na mwepụ. N'ihi ya, Nọmba Mayan nwere njikọ ụbọchị, ọnwa na afọ, nke bụ ya mere kalenda Mayan ji bụrụ otu n'ime ọrụ ama ama ya ma bụrụkwa nke zuru oke ma zie ezi n'ụwa.
N'otu aka ahụ, usoro ọnụọgụ na mgbakọ na mwepụ nke ndị Maya bụ onye mbụ mepụtara usoro ọkwá. Nke ahụ bụ, uru ọnụọgụ ma ọ bụ ọnụọgụ dabere na ọnọdụ ya. Nke a ka m ga -akọwa n'ụzọ zuru ezu n'okpuru.
Etu esi ede Nọmba Mayan
Nọmba Mayan dị mfe nghọta na nghọta. Nke a bụ n'ihi na enwere naanị akara atọ, n'agbanyeghị na ụdịdị ahụ nwere ike ịdịgasị iche dabere na ojiji enyere ha. Ọnụ ọgụgụ ụfọdụ bụ maka codices, ndị ọzọ maka ihe ncheta na ndị ọzọ nwere ihe nnọchianya mmadụ.
Akara atọ bụ isi nke anyị nwere ike ịhụ na ọnụọgụ Mayan bụ: Isi ihe (1), otu ahịrị (5) na eju / mkpụrụ / shei (0).
Site na ijikọta akara atọ ndị a, enwere ike nweta ọnụọgụ Mayan site na 0 ruo 20. Site ebe a gaa n'ihu, ọ dị mkpa ka ị buru n'uche na na ọnụọgụ Mayan. A na -ekekọta ọnụ ọgụgụ 20 na 20.
Kedu maka ọnụọgụ Mayan site na 21 gaa n'ihu? Ọ bụ ebe a ka ị nwere ike nwee ekele maka usoro ọnọdụ nke ndị Mayan, nke ọnụ ahịa ọnụọgụ ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ dịgasị iche dabere na ọnọdụ achọtara ya, dabere n'ọnọdụ kwụ ọtọ nke ọnụọgụ ahụ nwere.
N'okpuru bụ ọnụọgụ (ndị na -aga site na 0 ruo 20), ebe na ọkwa dị elu ọnụọgụgụ bara uru ọnụọgụgụ nke ejiri 20 mụba.
Dịka ọmụmaatụ, na ọnụọgụ 25: na akụkụ ala bụ 5 (ahịrị nke ya na 5), ​​akụkụ nke elu ya na 20 (isi ihe hà nhata 1, mana ịnọ na akụkụ elu, a na -eji ya amụba 20).
Ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ ahụ nwere ọkwa nke atọ, mgbe ahụ ọnụ ọgụgụ nke dị na ọkwa nke atọ ga -amụba site na 3 (20 x 20). Mgbe ejiri ọkwa nke anọ mee ihe, mgbe ahụ ọnụ ọgụgụ nke dị na ọkwa nke 4 ga -amụba site na 8000 (20x20x20).
Njirimara nke ọnụọgụ Mayan
Dịka m kwuru na mbụ, otu ihe kpatara sistemụ ọnụọgụ Mayan ji dọta uche ndị ọkachamara bụ na ọ nwere oke mgbagwoju anya ka ejiri kee ya n'otu n'otu na ihe karịrị puku afọ abụọ gara aga, ebe ọ bụ na nyocha ekpughere na e kere ya otu narị nke afọ BC N'aka nke ọzọ, ọ pụtara maka ịbụ ọdịbendị mbụ na kọntinent America niile nwere echiche nke "enweghị ihe ọ bụla" ma ọ bụ "efu".
N'adịghị ka ihe anyị nwere ike iche na nlele mbụ, ndị Mayan emepụtaghị usoro ọnụọgụ ha iji rụọ ọrụ mgbakọ na mwepụ, kama ha ji ya tụọ oge. A maara nke a n'ihi eziokwu na ndị ọkà mmụta ihe ochie achọpụtala foduru ebe a na -eduzi ọnụ ọgụgụ ahụ na nha nke oge na nkewa ya na ụmụ irighiri ihe. Agbanyeghị na ha na -ejikwa ya agwa ihe ndị ọzọ.
A na -ahụta usoro ume nke ndị Mayans ka ọ bụrụ nke kacha zie ezi n'ụwa. N'otu aka ahụ, ekwenyere na Kalenda Mayan ziri ezi karịa kalenda Gregory nakwa na o nwere otu nkenke dị ka usoro nha ọgbara ọhụrụ.
Ọ bụ ezie na ihe bụ isi usoro nọmba ha bụ ịtụ oge, ekele ya ha mekwara nnukwu ọganihu na geometric, astrology na mgbakọ na mwepụ.
Banyere geometry, amaara na Mayas doro anya nke ọma banyere echiche nke triangle, square, rektangulu, gburugburu na gburugburu, gbakwunyere, ha nwere ike tụọ akụkụ. Ha maara ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ọnụ ọgụgụ geometric na mpịakọta jiometrị, na -enwe ike ịlele ma jiri ha mee ihe dị mma.
Usoro ọnụọgụ Mayan anyị na -ekwu maka ya bụ nke kacha mara amara, mana ọ bụghị naanị usoro ọnụọgụ ndị Mayan ji.
Sistemụ nọmba “isi” nke Mayan
Usoro nọmba ọzọ a nke ha jiri mara nke ukwuu n'ihi na ha jiri isi chi dị iche iche were nọchite anya ọnụọgụ, ọ bụ ya mere eji mara ya sistemụ ọnụọgụ isi. Ọ bụkwa sistemụ siri ike na ọnụọgụ ya bụ 20.
N'ime usoro nọmba a ọnụ ọgụgụ chi kacha elu nke enwere ike ịnọchite anya ya bụ 14, yabụ na ha zuru ezu iji kpuchie nọmba site na 0 ruo 13. Gịnị ka ị mere iji nọchite anya ọnụọgụ isii furu efu ruo 6? Ha debere nọmba Mayan site na 19 ruo 10 n'akụkụ ala nke agba chi nke nọchiri anya 4.
Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ usoro dị mgbagwoju anya na nke ezughi oke, ọ bụ ya mere ejighị ya mee ihe n'ọtụtụ obodo ndị Mayan, ọtụtụ n'ime ha jiri sistemụ isi, eriri na eju.
Ndị Mayan bụ otu n'ime mmepeanya kacha dị egwu ma dị ịtụnanya n'ụwa, ikekwe bụrụ ihe kachasị elu maka oge ha n'ọtụtụ ụzọ. Ọganiihu ya na mgbakọ na mwepụ, usoro ọnụọgụ ya, kalenda ya, ụkpụrụ ụlọ ya, ihe ọmụma banyere eluigwe na ụwa, wdg, n'ọtụtụ akụkụ ndị a karịrị mmepeanya ọ bụla ọzọ.
Ọzọ anyị ga -ahụ vidiyo na -atọ ụtọ gbasara ọnụọgụ Mayan:
Ọpụpụ ya na ọdịnihu
Ndị ọkachamara kwenyere na mwepu nke mmepeanya Mayan weere ọnọdụ n'etiti XNUMXth na XNUMXth narị afọ nke oge anyị, nke bụ otu n'ime ihe omimi kachasị ukwuu na akụkọ ntolite nke mmadụ. Ruo taa, amabeghị ihe na -aga n'ihu ịhapụ nnukwu obodo Mayan, nke ghọrọ nnukwu obodo nwere nnukwu ọdịbendị na teknụzụ. Ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme na -aga n'ihu na -achọ ihe ga -eme ka ọ ghara ịdị.
Ka ọ dị ugbu a, ụfọdụ echiche a na -ekwu banyere mgbahapụ nke obodo Mayan na -ekwu maka ọdachi ndị na -emere onwe ha, mwakpo nke alaeze ndị ka ike ma ọ bụ ọbụna mpụta nke akụ nke mere ka ha kwaga ebe nwere ala ndị na -eme nri. Otú ọ dị, ọ dịghị nke ọ bụla n'ime echiche ndị a nke a nwapụtara.
Ma, Kedu ihe ndakpọ a pụtara maka sistemụ ọnụọgụ Mayan, kalenda ha na ọganihu niile ha mere? Ihe omuma a niile kariri nke Europe nke oge a na ikekwe ụwa.
Mgbe ndị Spen rutere Yucatán na narị afọ nke XNUMX, ọdịda nke mmepeanya ndị Mayan mere ọtụtụ narị afọ gara aga, yabụ na kọntaktị nke ndị Spen na ọdịbendị ndị Mayan ndị ọzọ adịghị mkpa dị ka nke ya na ndị Aztek na ndị ọzọ. mmepeanya ndị ka chekwara nnukwu ụlọ.
Ndị mmadụ bi n'otu mpaghara ala ahụ chịkọtara ihe nketa mgbakọ na mwepụ nke ndị Mayan na ha, ọkachasị ndị Aztek, bụ ndị pụtakwara maka nnukwu mgbakọ na mwepụ, n'agbanyeghị na usoro mgbakọ na mwepụ Aztec nwere ọtụtụ ọdịiche n'ihe gbasara usoro Mayan.
Na njedebe nke mmepe Aztec na nnukwu mmepeanya ndị ọzọ nke Mesoamerica, foduru nke ọdịbendị Mayan nọgidere na akụkọ ntolite. Ihe foduru fọdụụrụ maka ọmụmụ na ihe ọmụma anyị pere mpe ma baa oke uru.. N'ime ihe foduru nke ihe ọmụma Mayan, Dresden Codex pụtara, nke bụ akwụkwọ kacha ochie na America niile, ebe enwere akụkụ zuru oke nke enyere na kalenda na usoro ọnụọgụ ya.
Na -esote, anyị akwadebela gị mmega ahụ ole na ole ka ị nwee ike nwalee ihe ọmụma gị gbasara ọnụọgụ Mayan. Ị nwere ike ịtụle ihe anyị na -amụta n'ime akụkọ a na -enweghị nsogbu, ihe dị mkpa bụ ka ị debe ihe ndị bụ isi na isi ihe 🙂 jisie ike!
Inicio » omenala » Nọmba Mayan sitere na 1 ruo 1000
5 kwuru na "ọnụọgụ Mayan sitere na 1 ruo 1000"
Ọktọba 2, 2018 na 1:26 ụtụtụ
Amaghị m, kpọọ m
November 8, 2018 na 12:56 am
November 11, 2018 na 4:01 pm
Ọ dị mma maka ekele klaasị!
Abụọ 24, 2019 na 5:30 pm
Achọrọ m nọmba 43793 401 2348 na 716 na ọnụọgụ Mayan maka ọrụ m na klaasị
Aha ya bụ Laura Palacios
Ọktọba 10, 2019 na 1:59 ụtụtụ
Eziokwu bụ na enwere m obi abụọ. Ọ ga -amasị m ịma ka esi ede ụbọchị kama afọ nke bụ 2016